Maitiro, Mvumo uye Mvumo | Martech Zone
Muvhuro, March 16, 2009 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ini ndanga ndichiverenga yeWebhu Dhizaini magazini (inopenya magazini!) Uye muchikamu chakanzwikwa chaive:
Kambani yevagadziri inogadzira kodhi. Kambani yemaneja inogadzira misangano. Tweet kubva kuna Greg Knauss, Programmer.
Zvakandiita kuti ndifunge nezve kutanga. Sekutanga kushanduka, ini ndinofunga kune akati wandei mhando dzevashandi vanouya pabhodhi:
Kutanga kuuya vaiti. Ivo vanoita kuti zvinhu zviitwe, zvisinei.
Kozouya vatungamiriri. Ivo vanobatsira kutungamira ivo vanoita uye kubatsira kusundira iyo kambani munzira kwayo.
Kwozouya mamaneja. Ivo vanoisa maitiro, mvumo uye mvumo.
Nhanho 3 inhanho inokanganisa. Izvo zvinangwa zvemaitiro, mvumo uye mvumo ndeyekusimbisa mhando uye chengetedzo. Nekudaro, painokanganisa kugona uye kutanga kwekambani iri kukura, inozoiviga. Ndakaona izvi pese pese pandakatanga kushanda.
Kupa bhuku rekupenda uye makrayoni kune munhu ane useza uye kuvaudza kuti vagare mumitsara inzira-yemoto yekuona kuti haugone kuwana chidimbu cheunyanzvi hwakakosha.
Tags: yakasimudzira twitter accountmazanovideo conference
Basa guru revatungamiriri hakusi kudzora asi kugonesa. Kana masangano atanga kutarisa kudzikamisa zvinogona kuitwa nevanhu kwete kukumbira kugona kwevanhu kugadzira, unotanga kuve nematambudziko akakomba.
Zvinosuruvarisa, mamaneja mazhinji akasungirirwa mupfungwa iyo manejimendi inodaira kuti mumwe munhu anofanira kushanda sei. Muchokwadi, mamaneja makuru vanhu avo bvisa migwagwa kushanda kuti vanhu vakangwara musangano varatidze kugona kwavo pachinzvimbo chekurwa nesystem.
Isu takafukidza zvinoitika kune vashandi pasi pevadzvinyiriri manejimendi yapfuura kune yedu Superbowl Ad edition ye Iyo Methodology Blog. Ona nyaya izere pa:
Ameni, Robby! Akawanda mamaneja anotenda kuti ibasa ravo 'kuvandudza' vashandi pane 'kugonesa' vashandi. Ndagara ndiine vanhu vandibhadharira se 'nyore bhosi', asi ini zvakare ndakagara ndichidarika chero tarisiro kana ndapihwa mukana.